အီမို - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉၈၀ အလယ်ပိုင်းများ Washington, D.C.
အီမို (အင်္ဂလိပ်: Emo; /ˈiːmoʊ/) သည် rock ဂီတ၏ ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဝိသေသလက္ခဏာများမှ melodic ဂီတပညာနှင့် အတွင်းစိတ်ကို ပေါ်လွှင်စေသော အပြစ်များကို ဝန်ခံထားသော စာသားများပါရှိသည်။ ဤဂီတသည် ၁၉၈၀ အလယ် Washington D.C လှုပ်ရှားမှုမှ စတင်ခဲ့သည်။ emotional hardcore (သို့) emocore ဟု လူသိများပြီး တီထွင်သော တီးဝိုင်းများမှာ Rites of Spring နှင့် Embrace တို့ဖြစ်သည်။ ဤပုံစံသည် American punk တီးဝိုင်းဖြင့် ပဲတင်ထပ်သကဲ့သို့ ဤအသံနှင့် အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ pop punk နှင့် indie rock ကို ရောစပ်ထားသည်။ ၁၉၉၀ တွင် Jawbreaker နှင့် Sunny Day Real Estate တို့ကြောင့် အမှတ်တရဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ရာစုအလယ်တွင် Midwestern Central United States မှ အတော်များများ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ independent record labels ကိုယ်စီ ဤပုံစံကို အထူးပြုခဲ့သည်။
၂၀၀၀အစောပိုင်းတွင် Jimmy Eat World နှင့် Dashboard Confessional တို့၏ platinum-selling အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ Emo သည် mainstream ယဉ်ကျေးမှုသို့ ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ aggressive မျိုးခွဲ scream ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ မကြာသေးခင်ကနှစ်များတွင် ဝေဖန်ရေးဆရာများနှင့် သတင်းစာဆရာများက emo ဆိုသော ဝေါဟာရကို များပြားစွာသော အနုပညာရှင်ဆီသို့ အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်။ multiplatinum ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများပါဝင်သည်။ Fall Out Boy နှင့် My Chemical Romance ပါဝင်ပြီး ခြားနားလွန်းသောအုပ်စုများမှာ Coheed and Cambria နှင့် Panic at the Disco အစသဖြင့် ဖြစ်သည်။	ဂီတထဲသို့ပေါင်းထည့်ခြင်းအနေဖြင့် emo သည် ဝါသနာရှင်များနှင့် အနုပညာရှင်ကြားထဲတွင် အချက်အလက်ဆက်သွယ်မှု လက္ခဏာဖြစ်စေခဲ့သည်။ fashion, ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အပြုအမှုများဆက်သွယ်၍ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။
၁ သမိုင်းကြောင်း ရှေ့ပြေး
၂ မူရင်း ၁၉၈၀
၃ တီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်း(၁၉၉၀ အစောပိုင်း)
၄ Underground ကျော်ကြားမှု (၁၉၉၀)
၅ လွတ်လပ်သော အောင်မြင်မှုများ (၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းနှင့် ၂၀၀၀ အစောပိုင်း)
၆ Mainsteam ကျော်ကြားမှု (၂၀၀၀ခုနှစ်)
၇ ကျော်ကြားမှု ကျဆင်းလာခြင်း
၈ Emo ပြန်၍ရှင်သန်ခြင်း (၂၀၀၀)
၁၉၈၀ တွင် DC hardcore တီးဝိုင်းများတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူတို့အများစုမှာ hardcore punk တီးဝိုင်းနှင့် post-hardcore တီးဝိုင်းများဖြစ်သည်။ Post-hardcore သည် hardcore punk ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး post-punk ကဲ့သို့ melodic နှင့် experimental ဆန်သည်။ hardcore punk ၏ပုံစံများကို Minor Threat, The Faith, Black Flag နှင့် Husker Du တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ငုင်းတို့သည် emocore တီးဝိုင်းများမှလည်း လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
Emo သည် post-hardcore ၏ ပုံစံတစ်မျိုးအဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ အစောပိုင်းတွင် washiton D.C မှ hardcore punk ဖြစ်ရပ်မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်ရပ်နှင့်အတူ အကြမ်းဖက်မှုများမြင့်တက်လာပြီး Minor Threat တီးဝိုင်းမှာ Ian Mackaye ကြောင့် နိုင်ငံရေးများကျယ်ပြန့်စေခဲ့သည်။ သူသည် ဂီတ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို အများနှင့် အတူမှ ပုဂ္ဂလိက အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည်။ Minor Threat မှ Guy Picciotto သည် Rites of Spring ကို ၁၉၄၈တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ hardcore ၏ melodic guitar များမှ ကိုယ်ပိုင်ကန့်သတ်ချက်များကို ကွဲလွဲသော rhythm နှင့်နက်နဲလှိုက်လှဲသော စာသားများကို စည်းကြပ်ထားခဲ့သည်။တီးဝိုင်းအများစု၏ ပုံဆောင်ဥပမာအများစုကို emo ဂီတ၏မျိုးဆက်များထဲတွင် ပါဝင်စေခဲ့သည်။ အတိတ်လွှမ်းဆွတ်ခြင်း၊ ခါးသီးခြင်းနှင့် မျော်လင့်ချက်များ စွန့်လွတ်ခြင်းများပါဝင်သည်။ အလားတူသောတီးဝိုင်းများသည် ၁၉၈၅ ၏ "နွေရာသီတော်လှန်ရေး" သို့နောက်သို့ လိုက်ပါခဲ့ကြသည်။ တောင့်တင်းစွာ ကန့်သတ်ထားသော hardcore မှ Wishington D.C ဖြစ်ရပ်အဖွဲ့ဝင်များသည် အလေးအနက်သုံးသပ်ဝေဖန်ကြသည်။ Gray Matter, Beefeater, Fire Party, Dog Nasty, Soulside နှင့် Kingface များသည် ထိုလှုပ်ရှားမှုသို့ ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
Emo မူလဝေါဟာရမှာ မသေချာပေ။ ၁၉၈၅ သို့ ပြန်လည်ရှာဖွေရပါလိမ့်မည်။ Andy Greenwald ၏အဆိုအရ (Nothing feels Good: Punk Rock, Teenager, and Emo ၏ စာရေးဆရာ) emo ၏မူရင်းဝေါဟာရမှာ လျှို့ဝှက်စွာ ဖုံးကွယ်ထားသည်။ သို့သော် ပထမဆုံးအနေဖြင့် ၁၉၈၅ ကို လက်တွေ့ရောက်ရှိရမည်။ Michael Azerrad ( Our Band Could be Your life၏ စာရေးဆရာ)သည်လည်း ထိုခေတ်အချိန်က စကားလုံးများကို ခြေရာခံခဲ့သည်။ ပုံစံမှာ emo-core ဟုလည်းခေါ်သည်။ ထိုဝေါဟာရသည် ၁၅နှစ်အတွင်း၌ တိုးတက်၍ မရေတွက်နိုင်သော တီးဝိုင်းများ များပြားခဲ့သော်လည်း ထိုဝေါဟာရကို နားကျဉ်းစက်ဆုပ်ကြသည်။Mackaye သည်လည်း ၁၉၈၅သို့ ခြေရာခံခဲ့သည်။ Embrace နှင့် Washington D.C တီးဝိုင်းများကို "emo-core" ဟု ရည်ညွန်းထားသော Thrasher မဂ္ဂဇင်းထဲမှ ဆောင်းပါးကို မှတ်ယူခဲ့သည်။ သူက ဒါတွေဟာ ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးကြားဖူးခဲ့သမျှအရာတွေထဲက သုံးစားမရတဲ့ အရာတွေပါပဲဟုဆိုသည်။ အခြားအခိုင်အမာတစ်ခုမှာ Mackaye က မဂ္ဂဇင်းတွင် self-mockingly ဟုသော စကားလုံးကို သုံးခဲ့စဉ်တွင် ထိုဝေါဟာရကို တီထွင်ခဲ့သည်ဟုလည်း အခိုင်အမာဆိုသည်။ (သို့) Rites of Spring နှင့်အတူစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Oxford English Dictionary တွင် emo-core ဟူသော ဝေါဟာရကို ၁၉၉၂နှင့်emoဆိုသော ဝေါဟာရကို ၁၉၉၃နှင့် "emo" သည် ၁၉၉၅ -New Musical Express တွင် ပုံနှိပ်မီဒီယာနှင့်အတူ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
emocore ဟူသော အမျိုးအမည်သည် Washington D.C punk ဖြစ်ရပ်တွင် အလျင်အမြန်ကျယ်ပြန်လာသည်။ Ian Mackaye ၏ Dischord Record label နှင့်ဆက်နွယ်၍ တီးဝိုင်းအများစုနှင့် ချိတ်ဆက်လာခဲ့သည်။ Jenny Tooney ပြောကြားသည်မှာ လူအများပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက် မနာလိုစရာမှာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်ကာအဖြစ်အပျက်ကို စွဲလမ်းစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Rites of Spring သည် ဤစကားရပ်မတိုင်မီတည်ရှိပြီး သူတို့မုန်းတီးခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဒါဟာ ကံကြမ္မာ၏လှုပ်ရှားမှုပင်ဖြစ်သည်။ လူတွေက grunge ဂီတကို စတင်သိရှိနေချိန်တွင် သင်ဟာ ဒါကိုမုန်းတီးနေတောင်မှ သင်အသုံးပြုနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် emoဖြစ်ရပ်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်မှ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၆တွင် လှုပ်ရှားမှုအဓိကတီးဝိုင်းများမှာ Rites of Spring, Embrace, Gray Matter နှင့် Beefeater တို့ပါဝင်သည်။ ထိုဖြစ်ရပ်မှ စိတ်ကူးနှင့် ရသပညာများသည် network များ၊ vinyl record တို့မှ တစ်ဆင့်ပျံနှံသွားခဲ့သည်။ ရှစ်ဆယ်အလယ်တွင် D.Cတွ င် ဆယ်စုနှစ်အကြာအထိ နိုင်ငံတကာpunk ဖြစ်ရပ်မှ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့် ဂီတ၏စွမ်းအားများကို လူအများတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ Washington ဖြစ်ရပ်ကို "emocore" ဟုအများဆန္ဒအရ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Mackayeနှင့် Picciotto နှင့် Rites of Spring ဒရမ်သမား Brendan Canty သည် fugazi ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် emoနှင့် ဆက်စပ်နေသော်လည်း emo တီးဝိုင်းဟုမမှတ်ယူကြပေ။
ဝါရှင်တန်ဒီစီ emoလှုပ်ရှားမှုမှ စိတ်ကူစိတ်သန်းများသည် အမေရိကန်ကို ပြန့်နှံသွားသကဲ့သို့ local ဖြစ်ရပ်များမှ တီးဝိုင်းအများစုသည် hardcore နှင့်အတူတုပြိုင်၍ အသံများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ hardcore ၏တင်းမှာမှုနှင့်အတူ ပုံစံများကို ပေါင်းဖက်ခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းများသည် များပြား၍ ကွဲလွဲသော်လည်း emocore ၏ရသပညာ(၁၉၈၀နောက်)မှာ အနည်းနှင့်အများဆိုသလို ကျန်ရှိနေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ၁၉၉၀ အစောပိုင်းတွင် တီးဝိုင်းအများအပြားကို တီထွင်ဆန်းသစ်လာကြသည်။ ဆယ်စုနှစ်သစ်တွင် တီးဝိုင်းနှင့် ဝါသနာရှင်များကြားထဲတွင် ရင်းနှီးလာကြသည်။ mainstream သို့ယူဆောင်စေခဲ့သည်။
၁၉၉၁ တွင် Nirvana ၏ Nevermind ၏ အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ အမေရိကန်တွင် underground ဂီတနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများသည် အကြီးမှားဆုံးလုပ်ငန်းများဖြစ်လာခဲ့သည်။ network မှ ဖြန့်ချိခြင်းများ ပေါ်ထွက်လာပြီး ခရီးစဉ်များကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဖျော်ဖြေမှုများသည် အောင်မြင်လာခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည် သူတို့ကိုယ်သူတို့ independent ဂီတ၏ ပရိတ်သတ်များဖြစ်သည်ဟု အတိအလင်းကြေညာခဲ့သည်။ punk ဂီတသည် mainstream သို့ဝင်လာခဲ့သည်။ ဂီတဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင် emo၏ ရသပညာများ mainstream ထဲသို့ပျံနှံခဲ့သည်။ emoဆိုသော ဝေါဟာရသည် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လျှင် Jawbreaker နှင့် Sunny Day Real Estate တို့သည် အကြီးမားဆုံးအတင်းအဖျင်းစကားများဖြစ်သည်။
Jawbreaker က emo ၏ Rosetta stone ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။ ၁၉၈၀နောက်ပိုင်းနှင့် ၁၉၉၀ အစောပိုင်း၏ဆန်ဖရန်ဆစ္စကို punk rock ဖြစ်ရပ်မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သူတို့၏သီချင်းရေးသည့်ပုံစံသည် hardcore punk နှင့် pop punk တို့နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၁၉၈၀အလယ် emocore ၏အနုပညာလက်ရာများကို ယူသုံးထားသည်။ အဆိုနှင့် ဂီတာသမားဖြစ်သူ Blake Schwarzenbach တို့သည် သူ၏စာသားတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကြောင်းအရာများ ရေးဖွဲ့ထားသည်။ သူတို့သည် metaphors တွင်မှေးမိန်သော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ခဲ့သော်လည်း သူတို့သည် ခါးသီးမှုများနှင့် အချည်းနှီးဖြစ်သော စာသားများကို ပရိတ်သတ်များဆီသို့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
Schwarzenbach သည် emo၏ ပထမဆုံး idol ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Jawbreaker ၏၁၉၉၄ album 24 Hour Revenge Theory သည် ဝါသနာအိုးများကြားထဲတွင် အားပေးခြင်းခံရပြီး ၁၉၉၀ အလယ် emo ၏မှတ်ကျောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းသည် အဓိက record label ဖြစ်သည့် Geffen Record တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး Nirvanaနှင့် Green day တို့နှင့်အတူခရီးစဉ်များပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူတို့သည် Dear You album (၁၉၉၅)ပြီးနောက် သူတို့ပြိုကွဲခဲ့သည်။ Schwarzenbach သည် နောက်ပိုင်းတွင် Jetsto Brazi ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမှု Jawbreaker ၏ အသံများနှင့် pop punk တီးဝိုင်းများအောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း သူတို့လွှမ်းမိုးမှုများ ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
၁၉၉၀ အစောပိုင်း grunge ပေါက်ဖွားချိန် အတောအတွင်းတွင် Sunny Day Real Estate ကို Seattle တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် မြင့်မားသော ဂီတရည်မှန်းချက်များ၊ ရှုပ်ထွေးသော သီချင်းရေးစပ်ပုံများနှင့်အတူ ပြီးပြည့်စုံသော ဂီတသမားများဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဦးဆောင်သူ Jeremy Enigk သည် Falsetto တွင် ပြင်းထန်စွာသီဆိုခဲ့သည်။ မကြာခဏဆိုသလို ကြုံရာကျပန်း စာသားများနှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ တီးဝိုင်း၏ပွဲဦးထွက် album Diary (၁၉၉၄)သည် ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဂီတ video သည် MTV တွင် လက်ခံထုတ်လွင့်ခဲ့သည်။ တီးဝိုင်း၏ဂီတသည် grunge နှင့် emoကြားထဲတွင် ကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။
အခြားemoနှင့် punk တီးဝိုင်းများသည် နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ပြီး emo ဟူသော ဝေါဟာရသည် မသဲမကွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ နယ်နမိတ်သတ်မှတ်ထားသည်မှာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းသည်။ Diary ပြီးနောက် Sunny Day Real Estate ပြိုကွဲခဲ့သည်။ အခြားအဖွဲ့ဝင်များသည် Foo Fighter ကဲ့သို့ Project ထဲများသို့ အလုပ်လုပ်နေစဉ် တစ်ယောက်တည်း အသက်ဝမ်းကျောင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် album သုံးခုကျော်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Emo ကို ၁၉၉၀တွင် တီထွင်ဆန်းသစ်ခဲ့သော်လည်း Policy of3နှင့် Hoover တို့သည် post-hardcore ဆက်လက်ကျန်ရှိခဲ့သည်။
Underground ကျော်ကြားမှု (၁၉၉၀)[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၉၀ အလယ် American punk နှင့် indie rock လှုပ်ရှားမှုသည် ၁၉၈၀ အစောပိုင်းကတည်းက underground တွင်ကြီးမားလာခဲ့သည်။ mainstream ယဉ်ကျေးမှု၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Nirvana ၏ အောင်မြင်မှုပြီးနောက် major record label များသည် alternative rock ၏ကျော်ကြားမှုကို အရင်းအနှီးမတည်ခဲ့သည်။ အခြားunderground ဂီတကို independent တီးဝိုင်းများလက်မှတ်ရေးထိုးလာကြသည်။ ကြီးမားသော ပမာဏဖြင့် သူတို့ကို အဓိက ထောက်ကူပေးကြသည်။ ၁၉၉၄တွင် Jawbreaker ၏ 24 Hour Revenge Therapy နှင့် Sunny Day Real Estate ၏ Diary တို့ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Punk rock အနုပညာရှင် Green Day နှင့် Offspring တို့သည် သူတို့၏ Dookie နှင့် Smith album အသီးသီးနှင့်အတူ multiplatinum အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ underground နိုးကြွမှုနှင့်အတူ emo အမျိုးအစားကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Jawbreaker, Driver Like Jehu နှင့် Fugazi တို့၏လှုံဆော်မှုကြောင့် hardcore၏ပြင်းထန်မှုနှင့် indie rock ၏ စွမ်းရည်တို့ ရောစွန်းသော emo ဟူသော အသံပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ချောမွေ့သော သီချင်းများ ပေါ့ပျက်သော Melody များ၊ ပြင်းပြသောအဆိုများနှင့်အတူ punk rock ၏စွမ်းအားဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာကြသည်။
Midwestern နှင့် central United State မှ emo တီးဝိုင်းများ ပေါ်လာခဲ့သည်။ Chicago မှ Cap’n Jazz, Champaign-Urbana မှ Braid, Denver မှ Illinois, Christie Front Drive , Austin Texas မှ Mineral၊ Mesa, Arizona မှ Jimmy Eat World, Kanas City, Missouri မှ The Get up Kids နှင့် Milxaaukee, Wisconsinမှ The Promise Ring တို့ ပါဝင်သည်။ အရှေ့ကမ်းခြေ နယူးယောက်စီးတီး အခြေစိုက် Texas is the Reason သည် indie rockနှင့် emo ကို သူတို့၏တိုတောင်းသော နေထိုင်မှုပုံစံထဲမှ ကျော်လာခဲ့သည်။ New Jersey မှ lifetime သည် melodic hardcore ပုံစံမှ ဂုဏ်သတင်း ကျော်စော်လာခဲ့သည်။ hardcore နှင့် emo ရောစပ်ထားသော သူတို့၏ Hello Bastards (၁၉၉၅) သည် Jade Tree Records တွင် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ နေရာတကာအကောင်းမမြင်ခြင်းများနှင့် ပြောင်လှောင်ခြင်း ဦးစားပေးထားသည်။ album copy ၁သိန်းရောင်းချရပြီး New Jersey နှင့် Long Island မှ emo အနုပညာရှင်များဖြစ်သော Brand New, Glassjaw, Midtown, The Movielife, My Chemical Romance, Saves the Day, Sense Fail, Taking Back Sunday နှင့် Thursday စသောတီးဝိုင်းများကို လှုံဆော်နိုင်ခဲ့သည်။
The Promise Ring သည် emo ပုံစံသစ်မှ ပထမဆုံးတီးဝိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏ ဂီတသည် နှေးကွေး၍ pop punk မှ hardcore ဆီသို့ချဉ်းကပ်ထားသည်။ Jade –Tree သည် သူတို့၏ ပွဲဦးထွက် album Everywhere ကို ၁၉၉၆တွင် ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး အချပ်ရေ သောင်းကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ အခြားတီးဝိုင်းများမှာ Karate, The Van Pelt, Joan of Arc နှင့် The Shyness Clinic များဖြစ်ပြီး post-punkနှင့် noise rock အစိတ်အပိုင်းများကို emo ထဲသို့ ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။
၁၉၉၀အလယ် emo ၏အုတ်မြစ်မှာ Weezer Pinkerton (၁၉၉၆)ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ multiplatinum ရရှိသော ပွဲဦးထွက် album ဖြစ်ပြီး သူတို့၏power pop ကိုကြမ်းတမ်းအောင်ပြလုပ်ထားသည်။ ဦးဆောင် အဆိုတော် Rivers Cuomo ၏သီချင်းများသည် ရှုပ်ထွေးသည်။ လိင်ကိစ္စများနှင့် မခိုင်မြဲသော သူ၏ကျော်ကြားမှုအကြောင်းများ ပါဝင်သည်။ Rolling Stone တွင် ဒုတိယမြောက် အဆိုးဝါးဆုံး album ဖြစ်သည်။ Cuomo သည် လူထု၏အမြင်ကို လက်လျော့ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း album များမှာ hideous နှင့်ahugely painful mistake တို့ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ Pinkerton သည် ဆယ်ကျော်သက်တို့နှင့်အတူ alternative rock ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အရောင်းစရင်းတွင် album အနေဖြင့် ဝါသနာရှင်များကြားထဲတွင် တည်ငြိမ်လာခဲ့ပြီး messageboard နှင့် Napster တွင် နေရာရလာခဲ့သည်။
၂၀၀၀ခုနှစ်တွင် Weezer ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။ သူတို့သည် pop ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Cuomo သည် Pinkerton မှသီချင်းများတီးခတ်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း album သည် နောက်ဆုံးတွင် အမြင့်မားဆုံးအရောင်းစရင်းနှင့် ချီးကျူးခြင်းခံရသည်။ emo ဂီတကို မိတ်ဆက်ရာ၌ အမှတ်တရနှင့် mainstream ပရိတ်သတ်များကြီးထွားလာခဲ့သည်။
၁၉၉၀အလယ်တွင် emo၏ အနုပညာရသကို Mineral ကပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ထိုalbum များမှာ The Power of Failing (၁၉၉၇)နှင့် EndSerenading (၁၉၉၈)တို့ဖြစ်သည်။ Greenwalld သူတို့၏သီချင်း If I Could သည် ရှစ်ဆယ်အလယ် emo၏ အဆုံးစွန်သော ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သီချင်းစာသားအကျဉ်းချုပ်မှာ သူမှာဟာလှပပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အားနည်းပြီး ညံဖျင်းပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းထားသွားတဲ့အချိန်မှာ အံဩစရာကောင်းတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါပဲ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ တိုခေတ်အခါက အရေးပါသော Braid တီးဝိုင်းဖြစ်ပြီး သူတို့၏ Frame and Canvas album (၁၉၉၈) ထဲမှ “Forever Got Shorter” သည် တီးဝိုင်းနှင့် နားထောင်သူကြားတွင် စွန်းထင်စေခဲ့သည်။ ထိုအုပ်စုသည် ကိုယ်ပိုင်ပရိတ်သတ်များကို စိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့သည်။
၁၉၉၀အလယ်၏ emo ပုံစံသည် လူငယ်ပရိတ်သတ်ထောင်ကျော်ခန့်ရှိသော်လည်း အမျိုးသားရေးအသိကို မဖြိုခွဲနိုင်ပေ။ တီးဝိုင်းအနည်းငယ်သည် အဓိက label များနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် အခွင့်အရေး မရှာဖွေနိုင်စဉ်ပြိုကွဲခဲ့သည်။ Jimmy Eat World သည် ၁၉၉၅တွင် Capital Records နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူတို့၏ Static Prevails album နှင့်အတွက် emo အဖွဲ့အစည်းကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ဂီတသည် အတိတ်က Ska လှုပ်ရှားမှုတွင် ဆုံးရှုံးခဲ့သလို သူတို့၏ major-label အသင်းကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သော်လည်း mainstream သို့ မချိုးဖောက်နိုင်ပေ။ The Promise Ring သည် သူတို့၏၁၉၉၇album Nothing Feels Good သည် အဆင့်ငါးနေရာသို့ရောက်ရှိမှုနှင့်အတူ ထိုခေတ်အချိန်က အအောင်မြင်ဆုံးတီးဝိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Greenwald သည် ထို album ကို emo မျိုးဆက်သစ်ထဲတါင် အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူရည်ညွန်းပြောဆိုသည်မှာ ၁၉၉၀အလယ် emo သည် plastic အစား vinyl နှင့် paper သုံးသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
လွတ်လပ်သော အောင်မြင်မှုများ (၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းနှင့် ၂၀၀၀ အစောပိုင်း)[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၉၀နောက်ပိုင်းတွင် emo သည် independent ဂီတသို့လိမ့်တက်လာခဲ့သည်။ အမှတ်ရစရာ အောင်မြင်မှုများနှင့် record label များသည် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး mainstream ကို ဖြတ်သန်း၍ ပုံစံများ အုတ်မြစ်ချခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ emoသည် ဂီတလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်၍ ဝါသနာရှင်များရရှိခဲ့သည်။ ဤဝေါဟာရနှင့် ပတ်သက်၍ ဖျော်ဖြေမှုပုံများဖြင့် လုပ်ငန်းအကြီးစားများ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ဂီတသည် label ထဲ ဝင်ရောက်လာပြီး အုပ်စုများကြီးမားလာခဲ့သည်။ ကဏ္ဍာများသည် ပို၍ ကူးစက်လာသည်။ ရှစ်ဆယ် emo ပုံစံသည် ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။
၁၉၉၇တွင် Deep Elm Recordsသည် အစီအစဉ်အလိုက်ပေါင်းစပ်ထားသည့် album ဖြစ်သည့် The Emo Diaries ကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၂၀၀၇တိုင်အောင် ပျံနှံစေခဲ့သည်။ ထိုခြားနားချက်မှာ လက်မှတ်မထိုးရသေးသော တီးဝိုင်းများပါဝင်သည်။ Jimmy Eat World, Further Seems Forever, Samiam နှင့် The Movielife တို့ပါဝင်သည်။ ကွဲပြားသောတီးဝိုင်းများနှင့် ဂီတပုံစံများသည် emo ကို ဖုံးအုပ်ခဲ့သည်။ အစီအစဉ်များသည် emo ကို စနစ်တစ်ကျပြဋ္ဌာန်းရန် ကူညီနိုင်ခဲ့သည်။ underground ဂီတအဖွဲ့အစည်းဆီသို့ ဖြတ်သန်း၍ ပျံနှံစေခဲ့သည်။
Jimmy Eat World ၏ ၁၉၉၉ album Clarity သည် ၁၉၉၀နောက်ပိုင်း emo album များမှ အရေးပါသော album တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း emo တီးဝိုင်းများ၏ မှတ်ကျောက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ Andy Greewald (အမေရိကန်စာရေးဆရာ) ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ရေးသားထားသည်မှာ နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်၏ rock ‘n’ roll မှတ်တမ်းထဲမှ ပြင်းထန်သော ချစ်မြတ်နိုးမှုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ခေတ်ပြိုင် single emo တီးဝိုင်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရာတွင် သူတို့၏ album အများဆုံးဖြစ်သည်။ punk rock သည် အသံရောညီညွတ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ နွေးထွေးစွာ လက်ခံ၍ ထောက်ကူအားပေးခဲ့သော်လည်း Clarity သည် စီးပွားရေးအရ မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ တီးဝိုင်းသည် အဓိက label ဖြစ်သည့် Capital Records မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း album သည် ကျော်ကြားလာခဲ့ပြီး ဝါသနာရှင်များ၏တန်ဖိုးထားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အချပ်ရေ ရ၀၀၀၀ ကျော် ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ Jimmy Eat World သည် Dreamworks Record နှင့် လက်မှတ်မရေးထိုးခင် Bleed American (၂၀၀၁) album ကို ကိုယ်ပိုင်းအသံသွင်းခဲ့သည်။ album သည် ပထမအပတ်အတွင်း အချပ်ရေ ၃၀၀၀၀ကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ရွှေတံဆိပ်ဆုရခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် platinum ရရှိခဲ့ပြီး emo ဂီတသည် mainstream သို့ချိုးဖောက်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၆တွင် Drive-Thuru Record တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး အများအားဖြင့် အလှည့်ကျဖော်ပြစာရင်းထဲတွင်pop punk တီးဝိုင်းများနှင့် emo များတည်ငြိမ်ခဲ့သည်။ Midtown, The Starting Line, Movielife နှင့် Something Coporate အစရှိသဖြင့်ဖြစ်သည်။ Drive-Thuru ၏ထပ်တူလုပ်ငန်းဖြစ်သော အဓိက label MCA နှင့်အတူ emo မှ pop အထိပရိတ်သတ်များဆီသို့ ကျယ်ပြန့်စေခဲ့သည်။ New Found Glory (အမေရိကန် pop တီးဝိုင်း) သည် အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ သူတို့၏ ၂၀၀၀ခုနှစ် eponymous album သည် billboard တွင် နံပါတ် ၁၀၅ သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို album ထဲမှ single သီချင်း Hit or Miss သည် Modern Rock Tracks တွင် နံပါတ် ၁၅ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Hot Topic ကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။
Independent label Vagrant Records သည် ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းနှင့် ၂၀၀၀ အစောပိုင်းအောင်မြင်သော emo ဖျော်ဖြေမှုများမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ The Get up Kids သည် Vagrant နှင့်လက်မှတ်မထိုးခင် သူတို့၏ ၁၉၉၇ album Four Minute Mile သည် အချပ်ရေ ၁၅၀၀၀ ကျော် ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ Vagrant သည် တီးဝိုင်းကို အထောက်အကူပြုခဲ့ပြီး Green Day နှင့် Weezer ကဲ့သို့ ခရီးစဉ်များ ကျင်းပခဲ့သည်။ သူတို့၏၁၉၉၉ album Something to Write Home About သည် တသီးတခြားအောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည်။ Billboard ၏ Top Heatseekers စာရင်းတွင် နံပါတ်၃၁နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ emo နှင့် emo နှင့် ဆက်စပ်သော အနုပညာရှင်များသည် နှစ်နှစ်ကျော်ကျော်အထိ Vagrant နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး albumများဖြန့်ချိခဲ့သည်။ The Anniversary, Reggie and the Full Effect, The New Amsterdams, Alkaline Trio, Saves the Day, Dashboard Confessional, Hey Mercedes နှင့် Hot Rod Circuit တို့ပါဝင်သည်။ Saves the Day သည် အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းတွင် ကြီးမားလာခဲ့ပြီး ပထမအပတ်တွင် ၁၇၀၀၀ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ Billboard 200 တွင် နံပါတ် ၁၀၀ သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၀၀၀ ကျော် ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် နွေရာသီတွင် တီးဝိုင်းများနှင့် နိုင်ငံတကာခရီးစဉ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Microsoft နှင့် Coca-Cola ကတာဝန်ယူခဲ့သည်။ Vagrant သည် နိုင်ငံ၏အအောင်မြင်ဆုံး label များမှ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ emo ဟူသော ဝေါဟာရကို ကျော်ကြားစေရန် ကူညီခဲ့သည်။ Greenwald က Vagrant သည် အမေရိကတွင် emo ကို အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် အပြင်းထန်ဆုံး ရိုက်ခတ်နိုင်အောင်စွမ်းရည်များရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
Mainsteam ကျော်ကြားမှု (၂၀၀၀ခုနှစ်)[ပြင်ဆင်ရန်]
Emo ဂီတသည် အမှတ်ရစရာ အဖြစ်အပျက်များနှင့်အတူ ၂၀၀၂ ခုနှစ်နွေရာသီတွင် mainstream media သို့ ချိုးဖောက်နိုင်ခဲ့သည်။ Jimmy Eat World ၏ Bleed American album သည် platinum ရရှိခဲ့သည်။ ထိုထဲမှ The Middle single သည် Billboard ၏ Modern Rock Tracks တွင် နံပါတ်၁နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Dashboard Confessional တီးဝိုင်းသည် သူတို့၏ The Places U have come to Fear the Most album သည် independent Album များထဲတွင် နံပါတ်၅နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ထိုထဲမှ Billboard တွင် နံပါတ်၂၂နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ New Found Glory ၏ Sticks and Stones album သည် ထွက်ထွက်ချင်းတွင် Billboard တွင် နံပါတ် ၄နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ The Get Up Kid OnaWire (၂၀၀၂)album သည် Billboard 200 တွင် ၅၇နေရာနှင့် Top Independent Albums တွင် နံပါတ် ၃နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့၏ Guilt Show (၂၀၀၄)album သည် Billboard 200 တွင် နံပါတ် ၅၀ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ The Get up Kids, Jimmy Eat World, The Promise Rising နှင့် Dashboard Confessional ကို emoအဖြစ် emoukd သီးသန့်လိုလားသူများက လက်မခံကြပေ။ သူတို့ကို "Mall Emo" ဟုလည်းခေါ်ကြသည်။
Saves the Day သည် Green Day, Blink-182နှင့် Weezer တို့နှင့်အတူ Madison Square Garden တွင် ခရီးစဉ်များ လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနှစ်ကုန်လောက်တွင် Late Night with Conan O’ Brien တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ alternative press မဂ္ဂဇင်းတွင် မျက်နှာဖုံးအဖြစ် ဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ "At Your Funeral" နှင့် "Freakish" စသော သီချင်းဗီဒီယိုများသည် MTV2တွင် ဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ Taking Back Sunday သည် Victory Record မှတစ်ဆင့် Tell All Your Friends (၂၀၀၂) album ကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Album သည် “Cute Without the “E” Cut from the Team” နှင့် “You’re So Last Summer” သီချင်းများနှင့်အတူ emoဂီတအတွက် အောင်မြင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် Billboard 200 တွင် ၁၈၃ နေရာသာ ရောက်ရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်း တွင် RIAAကပေးသော ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သည်။ emoဖြစ်ရပ်တွင် အလွှမ်းမိုးဆုံး album ထဲမှ တစ်ခုအဖြစ်မှတ်ကျောက်တင်နိုင်ခဲ့သည်။Vagrant Records နဲ့ပတ်သက်သော ဆောင်းပါများကို Time နှင့် Newsweek မဂ္ဂဇင်းကို ဖြန်ချီခဲ့သည်။ Andy Greenwald က emoဂီတသည် စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှု နှင့်အတူ mainstream ထွက်ပေါက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထိုအောင်မြင်မှုနှင့်အတူ emo တီးဝိုင်းများသည် အဓိက record label များလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ထိုပုံစံသည် ဈေးကွက်ဝင်သော ထုတ်ကုန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ mainstream ပရိသတ်များဆီသို့ ရောက်ရှိစေခဲ့သည်။ emo တီးဝိုင်း Tacking Back Sunday သည် ထိုနှစ်အတွင်းတွင် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ သူတို့၏ "Where You Want to Be" သည် Billboard 200 တွင် နံပါတ်၃နေရာသို့ ရောက်ရှိသည်။ ဒုတိယမြောက် This Photograph is Proof မှ I Know You Know သည် Spider-Man2တွင် ဇာတ်ဝင်တေးအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းခံရပြီး သူတို့၏ ၂၀၀၆ ခုနှစ် album Louder Now သည် mainstream သို့ ချိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပြီး Billboard 200 တွင် နံပါတ် ၂ နေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် MakeDamnDure Single သီချင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ album သည် RIAA မှပေးသော ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သည်။ Where You Want to be Having သည် ၂၀၀၅ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အချပ်ရေ ၆၆၇၀၀၀ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ Louder Now Having သည် ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် ဇွန်လ ၉ရက်နေ့တွင် အချပ်ရေ ၉၀၀၀၀၀ကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်အတွင်းတွင် emo သည် ပို၍လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။ နယူးဂျာဇီအခြေစိုက် Thurday တီးဝိုင်းသည် Islane Def Jam ဂီတအုပ်စုနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ သူတို့၏ Full Collapse (၂၀၀၁) album သည် Billboard 200 တွင် နံပါတ် ၁၇၈ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့၏ဂီတသည် emo တီးဝိုင်းများမှ ကွဲပြားခဲ့ပြီး The Smiths, Joy Divisionနှင့် The Cure တီးဝိုင်းများ၏လွှမ်းမိုးမှု ပါဝင်သည်။ တီးဝိုင်းသည် emo ရွှေ့ရှားမှုနှင့်အတူ Saves the Day တီးဝိုင်းကဲ့သို့ ခရီးစဉ်များ ကျင်းပခဲ့သည်။
Emo ၏ မျိုးခွဲ screamo သည် လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။ Hawthorne Heights, Story of the Year, Underoath နှင့် Alexison fire တီးဝိုင်းလေးခုသည် MTV မကြာခဏထုတ်လွှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ပုံစံများ ပြောင်းလဲမှုများပါဝင်သော်လည်း scream သည် အမှတ်ရလောက်အောင် ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ အခြား အမေရိကန် scream အနုပညာရှင်များထဲတွင် Comadre, Off Minor, Men As Trees, Senses Failနှင့် Vendetta Road တို့ပါဝင်သည်။ Screamo အဖြစ်အပျက်တွင် အထူးသဖြင့် ဥရောပတွင် ထင်ရှားလာခဲ့သည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် emo သည် ကျော်ကြားမှုကျဆင်းလာခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းအချို့သည် emo အရင်းအမြစ်မှ ရွေ့ပြောင်းသွားကြသည်။ တီးဝိုင်းအချို့သည် ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ဥပမားအားဖြင့် My Chemical Romance ၏ album Danger Days! The True Lives of the Fabulous Killjoys သည် emoပုံစံမှ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Paramore နှင့် Fall Out Boy တို့သည် ၂၀၀၃အတောအတွင်း emo ပုံစံမှ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Panic at the Disco သည် သူ၏ album များဖြစ်သည့် Too Weird to Live, Too Rare to Diel တို့သည် synthpop သည် ကျော်ကြားမှုကျဆင်းလာခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းအချို့သည် emo အရင်းအမြစ်မှ ရွေ့ပြောင်းသွားကြသည်။။ တီးဝိုင်းအချို့သည် ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် My Chemical Romance ၏ album Danger Days! The True Lives of the Fabulous Killjoys သည် emo ပုံစံမှ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Paramore နှင့် Fall Out Boy တို့သည် ၂၀၀၃ အတောအတွင်း emo ပုံစံမှ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Panic at the Disco သည် သူ၏ album များဖြစ်သည့် Too Weird to Live, Too Rare to Diel တို့သည် synthpop ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲထားသည်။
Emo ပြန်၍ရှင်သန်ခြင်း (၂၀၀၀)[ပြင်ဆင်ရန်]
Emo အမျိုးအစားသည် ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ အစောပိုင်းမှ အနုပညာရသများနှင့်အတူ ၂၀၀၀ တွင် တီးဝိုင်းများပြန်လည် နိုးထလာခဲ့သည်။ ကြီးမားသော underground ရွေ့လျားမှုနှင့်အတူ The World isaBeautiful Place & I’m No longer Araid to Die. A Great Big Pile of leaves, Pianos Become the Teeth, Empire! Empire! (I wasalonely Estate), Touche Amore The Hotelier နှင့် Into it. Over it တို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ hardcore punkနှင့်အတူ emo တီးဝိုင်းများနှင့်အတူ Title Fightနှင့် Small Brown Bike တီးဝိုင်းတို့ပါဝင်သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အီမို&oldid=496231" မှ ရယူရန်